Home Wararka Ciidankii Farmaajo ee ku sugnaa Gedo oo labo u kala jabay &...
Ciidankii Farmaajo ee ku sugnaa Gedo oo labo u kala jabay & cabsi ka dhalatay
Ciidamadii uu Farmaajo geeystay gobolka Gedo ayaa u kala jabay labo ilaa sadax qaybood, kuwaas oo u muuqada in ay dabada la galeen qabiil iyo beel sheegasho. Waraka ka imanaaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamadii Cabdirashiid Janan ee la heshiiyey dowladda Soomaaliya ay diideen in lagu daro ciidanka dowladda ee ku sugan qeybo kamid ah gobalka.
Ciidanka Janan ay sharuud ku xireen ku biirista ciidanka dowladda, taasoo ay ka biya diideen saraakiisha dowladda ee ku sugan gobalka Gedo. Ciidanka Cabdirashiid Janan ayaa dalbaday in la siiyo guddoomiyaasha degmooyinka Luuq, Doolow iyo Beladxaawo. Sidoo kale ciidankaan Janan ayaa dalbaday in la siiyo taliyaasha degmooyinkaas ee Nabad Sugidda ama taliye ku-xigeenada.
Dhanka kale beelaha qaar ee ku dhaqan qaybo ka mida Gobolka Gedo ayaa ugu baaqay askarta ka soo jeeda jufadooda in ay gabi ahaanba isaga soo baxaan degaanada ay ugu jiraan forontiga.
Waxaa ilo lagu kalsnoon yahay not xaqiijiyeen Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa la filayaa in uu safar ugu baxo gobalka Gedo, waxaana safarkiisa ku wehlin doono saraakiil ka tirsan Villa Somalia, ayadoo ujoodka safarkooda lagu sheegay in xal loogu raadinayo arrimaha ka soo cusboonaaday gobalka Gedo.